Kutsvaga kiibhodhi uye mbeva yeLinux? VANT inokupa iwe | Linux Vakapindwa muropa
VANT inotipa yakasarudzika keyboard uye mbeva kit yeLinux
UAV, iyo kambani yeSpanish yakazvipira kune Hardware uye yakanangana neLinux uye nekuzvipira kwakajeka kune yemahara software, inodzoka kuzotipa isu inonakidza nhau ine yakakosha keyboard uye mbeva kit yeLinux. Isu takatotaura pane ino blog kakawanda nezve UAV uye zvino tine nhau itsva dzatinofanira kugovana newe.
VANT inotipa iyo kit inosanganisira mbeva uye keyboard yakasarudzika edition yeLinux, ichitsiva inooneka inogumbura Start kiyi (ine Windows logo) neimwe ine Tux logo. Shanduko idzo, kunyangwe dzisiri dzehunyanzvi, ichiri sarudzo yakanaka kune vashandisi veLinux vasingade kuona logo iri neMicrosoft pane yavo keyboard.
Nehurombo iyo vagadziri vekhibhodi Standard inowanzo sanganisira iyi logo pane iyo yekutanga kiyi, zvisinei nekuti ndeipi mhando yeanoshandisa system iyo inotarisirwa komputa iri kuita Uye izvi zvinokonzerwa nekutonga kukuru kweWindows desktop musika. Asi hazvina musoro kune avo vasingashandise ino Microsoft system.
VANT zvakare inovimbisa kuti iri chaizvo Buena calidad uye kuti inonyatsofungidzirwa kutsigira rakasimba basa revatariri manejimendi. Iyo kit ichave inosanganisirwa mune ako ese VANT CELL uye VANT PURE desktops, asi ichatengeswa zvakare zvakasiyana kune vashandisi veLinux vasina makomputa eUAV.
Kana iwe uchida kuziva mamwe maficha nezve mbeva uye keyboard, pano ndinovasiya:
Khibhodi: ine membrane mashini, compact uye ergonomic dhizaini. Chinja makiyi epamba ne logo yeTux. Huru mhando uye yakanyarara, inotsvedza mukunyora kwako (iwe unongoda simba re55g mukutsimbirira kiyi yega yega). Kuenderana neLinux kernel masisitimu ari 100% akavimbiswa uye dhizaini yacho compact.
Mouse: ergonomic, yakanyatsogadzirirwa vashandisi vekurudyi, 1600 DPI optical sensor (ine mukana wekuchinja kunzwisisika "pane nhunzi" kuburikidza nekiyi yepakati. 800, 1200 uye 1600 DPI tsika dzinobvumidzwa). Iyo ine USB interface uye haidi madhiraivha ekuisirwa kwayo muLinux. Iyo ine kumhanya kwe30PPS uye inotsigira kumhanyisa kwe15G. Kurema kwayo kuri 122 gramu chete uye dhizaini yacho inoenderana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » VANT inotipa yakasarudzika keyboard uye mbeva kit yeLinux
Ini handina kana chinhu chinopesana nezvinotsigirwa zvakatumirwa (uye zvishoma kana zviri zvekambani inotsigira Linux) asi zvinofanirwa kujekesa semusoro wenyaya.
Kutsigirwa? Hahaha UAV haina kana kutitenda. Isu takangonyora nezvazvo sekungoita isu tinonyora nezve kuwanda kwemidziyo uye masystem. Saka kana iwe uchifunga kuti ichi chinyorwa chakatsigirwa ... Wakarasika kwazvo. Kana iwe usingazvitendi, bata VANT uye uvabvunze kana vakatipa yakaoma pir yechinyorwa ichi kana zvimwe zvatakanyora nezvavo.
Dai zvaive, ini ndaisazove nebasa kuzviisa, ini ndanga ndatoshanda kune mamwe mablog anobhadhara kunyora zvinyorwa kana kukupa zvishandiso zvekuyedza kwemazuva gumi nemashanu uye kunyora wongororo. Asi iyi blog haishande zvakadaro. Zvinosuruvarisa kana iwe uchifunga nezvazvo, asi munhu wese anogona kufunga zvavanoda
Mhoroi makadii, ndatenda nekatsamba, iyi keyboard nembeva inotsigira chero inoshanda system, Linux iyo inosimbisa uye zvakare yeWindows, ndine makomputa akati wandei uye ndinoda kuitora pane dzimwe nguva mune yega yega. Ndatenda
Netflix inowanikwa yeUbuntu